Vana veZimbabwe Vogonun'una Zvikuru Zvichitevera Kuvandudzwa kweBumbiro reMitemo yeNyika Ravakavhotera Muna 2013
Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kuita izvozvi musangano wepadandemutande achigunun’una nekuvandudzwa kwakaitwa bumbiro remitemo yenyika.
Vana veZimbabwe vachitungamirirwa nemasangano anoti Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Human Rights Association, Zimbabwe Peace Project pamwe neWeLead Trust vakaungana izvozvi pasi pedingindira rekuti #RambaUmbimbindoga #ResistDictactorship vachiratidza kutsutsumwa kwavo pane zviri kuitwa nevezvematongerwo enyika avo vakabvuma kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika iro rakaiswa muna 2013.
Vachitaura neStudio7 pamberi pemusangano uyu, mukuru weZimbabwe Human Rights Association, kana kuti ZimRights, VaDzikamai Bere, vati masangano akazvimiririra aya akokera musangano wepadandemutandeuyu kuitira kuti vanhu vakwanise kuratidza kunyunyuta kwavo.
VaBere vati vanhu vachakurukurirana kuti voita seyi nezvakaitwa nevari mune zvematongerwo enyika avo vakavandudza bumbiro remitemo vasina kuwirirana neveruzhinji vakavhotera bumbiro iri muna 2013.
VaBere vati musangano uyu chirongwa chekutanga chezvirongwa zvakawanda zvekurwira hutongi hwejekerere kuburikidza nekuremekedza zvido zveveruzhinji zvakaiswa mubumbiro ra 2013
VaBere vati vana veZimbabwe vari kushora zvakanyanya masimba akawanda akapiwa mutungamiri wenyika kuburikidza nemutemo wakatambirwa nedare reSenate nemusi weChipiri.
Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum, VaWilbert Mandinde, vati zvinoshungurudza zvakanyanya kuti bumbiro remitemo rakavhoterwa neveruzhinji rave kutanga kurudunurwa mitemo ichidzorerwa kune zvakarambwa neveruzhinji painyorwa bumbiro remitemo yenyika.
VaMandinde vati vana veZimbabwe havasi kuzoregera izvi zvichiitika.
Mumwe mugari wemuHarare, VaJeff Chaitezvi, varumbidza chirongwa chatorwa nevana veZimbabwe vakatiwo nguva yasvika yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviratidze kuti ndizvo zvakapa vezvematongerwo enyika simba.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa.
Nhengo dzedare reSenate makumi matanhatu neshanu dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika, uye nhengo gumi dzakapikisa kuvandudzwa kwaro.
Bhiri iri rinopa masimba mutungamiri wenyika kusarudza mutevedzeri wake pamadiro, kudoma vatongi vematare edzimhosva, kuwedzera huwandu hwemadzimai nevechidiki muparamende nemumakanzuru nezvimwe.
Bhiri iri rinowedzerawo makore ekuti mutongi wematare edzimhosva arambe ari pabasa mushure mekusvitsa makore makumi manomwe.
Mukuru wevatongi vematare edzimhosva, VaLuke Malaba, vari kufanirwa kuenda pamudyangigere musi wa 15 Chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe.
Asi bhiri iri rikasainwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, musi uyu usati wasvika, zvinoita kuti VaMalaba vasaende pamudyandigere voramba vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva.
Dare reConstitutional Court harisati rapa mutongo waro panyaya iyi kunyange hazvo mahofisi ehurumende kusanganisira emutungamiri wenyika, dare reNational Assembly nedare reSenate, akapihwa zviri pamutemo magwaro ekupikisa bhiri iri.